FBS၏ ကားရယူပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်အတွက် ကားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်တော် အမျိုးသား (အမျိုးသမီး) တစ်ဦးဦးအတွက် ကားအကောင်းစား တစ်စီးကို ဆုလက်ဆောင်အဖြစ်ချီးမြှင့်ပေးမည့် မကြာမီလာတော့မည့် ကားရယူပါ ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ကို စတင်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့အတွက် FBSအဖွဲ့သားအားလုံးက စောင့်တောင် မစောင့်နိုင်ကြတော့ပါ. သို့ရာတွင် ယခုအကြိမ်တွင် ဖောက်သည်တော်မိတ်ဆွေများ၏ အကူအညီကို ရယူဖို့ လိုအပ်နေပါသည်.
ဇိမ်ခံကားအမျိုးအစား ၅မျိုးထဲမှ နှစ်သက်ရာကို ကားအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါ:
မကြာမီကျင်းပပေးမည့် ကားရယူပါ ပရိုမိုးရှင်းပွဲတွင် ဆုရရှိသူကို ယခုရွေးချယ်ပေးမည့်ကားအမျိုးအစားကို ချီးမြှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်.
သင်အကြိုက်ဆုံးကားကို မဲပေးရွေးချယ်လိုက်ပြီး FBSရဲ့အစီအစဉ်တွေထဲကမှ ထရိတ်ဒါတွေ အကြိုက်ဆုံးအစီအစဉ် တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အစီအစဉ်ရဲ့ ကံထူးရှင်က ဘယ်သူဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ. ဘယ်သူသိမှာပါလဲ. မဲနှိုက်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာ သင်လည်း ကံထူးရှင် ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်!